Chhaharaa | संघीय राजधानीमा ठूला दललाई “नो भोट”
काठमाडौं । छसस । गत बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) को बचस्व देखिएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये ७२४ स्थानीय तहको परिणाम घोषणा भैसकेको छ । २९ वटा स्थानीय तहको मतगणना जारी रहेको छ । जसमा कांग्रेसले ७, एमालेले ११, माओवादी केन्द्रले २, जसपाले १, लोसपाले २ स्वतन्त्र २ पालिकामा अग्रता कायम गरिरहेका छन् । मतपरिणाम घोषणा भैसकेका ७२४ पालिका मध्ये नेपाली कांग्रेसले ३१८,एमालेले १९६, माओवादी केन्द्रले १२०, जसपाले ३०, नेकपा(एस) ले १७, लोसपाले १४, राप्रपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ४ र अन्य र स्वतन्त्र पार्टीले १० पालिकामा विजय हासिल गरेका छन। धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल र धरान उपमहानगरमा हर्कराज राई साङपाङले नगर प्रमुखमा जितेका छन। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा नेकपा(एस), इटहरी उपमहानगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसले चुनाव जितेको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार साह मेयरमा अगाडि छन। पोखरा महानगरमा गठबन्धनबाट नेकपा(एस) का उम्मेदवार धनराज आचार्य,भरतपुर महानगरको मेयरमा माओवादी केन्द्रकि रेनु दाहाल, वीरगन्ज महानगरपालिकामा जसपाका सिंहले अग्रता कायम गरिरहेका छन। काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह करिव २० हजार मतले अगाडि छन। बालेनले ४७ हजार मत ल्याएका छन् । उपमेयरमा मिस नेवाः सुनिता डंगोलले भारि मतले अग्रता हासिल गरिरहेकी छिन् । डंगोलले पनि ४५ हजार भन्दा बढी मत ल्याइ सकेकी छिन् । काठमाडौं महानगरमा कांग्रेसले १४ वटा वडा र एमालेले ७ वटा वडा अध्यक्ष जिति सकेको छ । तर मेयरमा भने बालेन्द्र साहले सबै वडाहरूमा बढी मत ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरका मतदाताहरूले यसपालि कांग्रेसकि उम्मेदवार सिर्जना सिंह र एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई रूचाएनन र इन्जिनियर तथा र्याप गितकार बालेन्द्रलाई मत खसाएको
पाइयो । काठमाडौंको मेयरमा बालेन्द्रले जित्ने करिव–करिव निश्चित जस्तै भएको छ । दोस्रो मत प्राप्त गर्न कांग्रेसकि सिंह र एमालेका स्थापित बीच प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । सिंह दोस्रो र स्थापित तेस्रो हुने सम्भावना देखिदैछ । काठमाडौंमा राप्रपा चौथो पोजिसनमा छ । विवेकशील साझा पार्टीकि समीक्षा बाँस्कोटाले यसपालि मत पाइनन् । विगत निर्वाचनमा विवेकशीलकि उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले २३ हजार भन्दा बढी मत पाएकी थिइन तर यसपालि विवेकशीलको एक हजार पनि मत नआउने भएको छ । मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्रलाई सबै वडाहरूबाट सबै भन्दा बढी मत आएको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरको हाल सम्मको नतिजा हेर्दा लौरो चुनाव चिन्हका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्रले निरन्तर अग्रता लिएको देखिन्छ । तर यो भोट बालेन्द्र चर्चित र समाजसेबी भएर आएको पक्कै होईन, उनले यो तयारी पाँच बर्ष अगाडीको थियो भनेर दुई महिना अगाडि ग्लालेक्सी टिभिलाई अन्तर्वार्ता दिएर गरिएको प्रचारले महानगरका मतदाताले भोट हालेका पनि होईन । बालेनलाई राजधानीका जनताले भोट हाल्नुको दुई कारण हुनसक्छ । बिगत पाँच बर्ष सम्म महानगर प्रमुख रहि काठमाडौंवासीको हितमा सिन्को नभाचेका एमालेका मेयर बिद्या सुन्दर शाक्यदेखि आजित भएका जनतालाई एमालेले दिनभरी हावादारी १० कुरा फेर्ने र महिलाको अपमान गर्ने गजडी केशव स्थापितलाई चाहेको देखिएन । महानगरमा मेरो पुरानो भोट नै ८० हजार छ भनेर महानगरको जनतालाई आफ्नो गुलाम सम्झने केशव स्थापितलाई एमालेले उमेदवार बनाएको आक्रोशमा एमालेको मत बिभाजित भएर आएको देखिन्छ । एमालेबाट मेयरका आकांक्षी रहेका शाक्य र रामवीर मानन्धरले पनि स्थापितलाई भित्रभित्रै असहयोग गरेको वडाअध्यक्षको मतबाट पनि पुष्टि भैसकेको छ । अर्कोतिर कांग्रेसको उम्मेदवार सिर्जना सिंह कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको पत्नी, गणेशमान सिंहको बुहारी भएकाले जनता र कांग्रेस कार्यकर्ताहरू भडकिए। घर सम्हालेर बसेकी सिर्जना सिंहलाई मेयर उठाएर प्रकाशमान सिंहले तीस–चालीस वर्षदेखि कांग्रेसको राजनीति गर्दै आएका सक्षम, योग्य, लोकप्रिय, जनाधार भएका नेताहरू तिर्थमान डंगोल, भिमसेनदास प्रधान, निलकाजी शाक्य, हरिप्रभा खडगी, प्रगतिमान रञ्जित लगायतको अपमान गर्दा कांग्रेस महानगरमा पछाडि परेको छ । आफ्नो परिबारको लिगेसीको लगातार ब्याज खोजेर चुला चौका गर्दै बस्ने राजनीति चतु¥याइँ नभएको सरल र शान्त स्वभाव भएकी सिर्जना सिंह भाउजूलाई चुनावी मैदानमा उतार्नु कांग्रेसको ठुलो गल्ती हो । उनलाई मेयरमा उठाउदा कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू रिसाउदा र असन्तुष्ट हुँदाको परिणाम बालेनको मत हो । अब प्रमाशमान सिंहलाई यसको असर संघीय संसदको चुनावमा समेत पर्ने देखिएको छ । जनतालाई गुलाम नै सम्झिने राजनीति दलको नेतालाई बिबेक प्रयोग गर्ने महानगरको जनताले हानेको लौरोको झटारोलाई सिंह परिवारले राम्रो शिक्षाका रूपमा लिन जरूरी छ । यसैगरि राजनीतिक संस्कार ओझेल पर्दै गईरहेको वर्तमान परिवेशमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्ने परिपाटीमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पनि क्रमशः त्रुर्टीपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा नै बहुआयामिक कोणबाट छलफल बहस गरि निर्णय गर्न नसक्दाको परिणति जय, पराजय जे सुकै हात लागे पनि ठुला राजनीतिक दलहरूमा दुई प्रवृतिले जवर्जस्त घर गरिरहेको छ । त्यो हो–पहिलो चुनाव जिते मेरो ब्यक्तित्व र लगानीले जिते भन्दै पार्टी र साथी भाईलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । दोस्रो हो चुनाव हारे साथी भाईले अन्तरघात गरे भन्दै रोइलो लाउने प्रवृत्ति । यी दुवै प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका विषाक्त परिघटना हुन् । यस घातक प्रवृतिबाट उन्मुक्तिको लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना पार्टी भित्र तल देखि माथि सम्म विशेष राजनीतिक, वैचारिक, इतिहास, दर्शन, सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, कला तथा संस्कारीक प्रशिक्षण चलाउन जरुरी भैसकेको देखिन्छ । अन्यथा नेपालका राजनीतिक दलहरु निजीकरण हुनेछन् र आदर्श राजनीतिको विलुपिकरण हुनेछ । त्यसैले बेलैमा यसतर्फ सबैको उचित ध्यान जान आवश्यक छ ।
चुनावमा कहिले कुन पार्टीले बढी मत ल्याएर जित्छन कहिले कुन पार्टीले । गत पाँच बर्ष अगाडि एमाले सवैभन्दा ठुलो दल थियोे भने यसपाली नेपाली कांग्रेसले एमालेको भन्दा आधा बढी पालिका जित्यो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भए पनि सफलता नै प्राप्त गर्याे । ज–जसले जितेपनि पार्टीहरुको चरित्र र कार्यशैली एउटै छ । यसमा परिवर्तन हुन्छ कि हुदैन ? सबभन्दा टहकारो विषय जनताप्रति समर्पण र ईमानदारीको
हो । प्रायःजसो र सबैजसो पद र ईकाईहरुमा वजेटको सहि सदुपयोग हुनु पर्याे । आखिर हाक्ने त माथिकाहरुले नै हुन । अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्ने संबैधानिक निकायहरु छन । त्यो कस्तो छ र कसरी बन्छ र उदेश्य अनुसार काम गरेको छ कि छैन । त्यो त हामीले बुझेकै छौ । समयमा चुनाव हुनु राम्रो कुरा हो तर जुनसुकै तहका निर्वाचितहरुले जनता प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु
पर्याे । निर्वाचनमा निकै ठुलो धनराशि खर्च भएको सबैलाई थाहा छ । यसले गर्दा निर्वाचन पछि वजारभाउ ह्वात्तै बढने गर्छ । खै यस्तो समस्यालाई कसले बुझ्ने र समाधान गर्ने हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार दशै र तिहारभन्दा धेरै रकम चुनावमा बैंकहरुवाट निकालिएको छ । अहिलेसम्म राजनीतिलाई ब्यापार बनाईएको छ । यसलाई कसरी रोक्ने
हो ? आम मतदातामा केही न केही परिवर्तन आएको छ जसले गर्दा स्वतन्त्र उमेदवारहरुले जितेका छन । राजधानीले पनि स्वतन्त्र उमेदवार छान्ने निश्चित छ तर नयाँ पिडीे अझै पनि पछाडि छन् । अहिले धनपतिहरुनै धेरै जनप्रतिनिधि भएर आएको सुन्दा वितेका पाँच बर्ष र आगामी पाँच बर्ष कसरी फरक
पर्नेहो ? माओवादी केन्द्रले यसपाली आफ्नो राजनीतिक इज्जत बचायो । माओवादी केन्द्रले विगतमा कयौ गल्ती गरेको होला तर नेपाली समाजमा इतिहासको अज्ञात कालदेखि हेपिएको, चेपिएका, दबाइएका, अमानवीय विभेदको शिकार बनाइएका दीनहीन एवं सिमान्तकृत अल्प संख्यक हरुलाई उठाएर यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउने माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अरु कुनै राजनीतिक शक्ति होइन । त्यसैले दर्जनौ वैचारिक मतभेदका बावजूद सिङ्गो नेपाल भित्रको पिछडियका पाखा पछारिएका जनसमुदायहरुले अहिलेपनि अन्तर आत्माबाटै समर्थन सहयोग गरि आफ्नो वकालत गर्ने पार्टीको संरक्षण गरेका छन्, माओवादी केन्द्रमा अझै एकताको खाँचो छ, अझै प्रतिगमनको खतरा टरेको छैन । सबै अग्रगमनका पक्षधरहरु एकजुट हुन जरुरी छ ।